कस्तो चाहिन्छ पत्रकारको नेतृत्व ? «
पत्रकारलाई समाजले आज किन गाली गर्दछ ? चौथोे अंग मानिने पत्रकारिता दूषित छ । यसलाई शुद्ध बनाउने प्रयास भए पनि त्यो आदर्शवादी नारामात्रै देखिन्छ । राजनीतिक रंगबिनाका पत्रकार मुस्किलले मात्रै भेटिन्छ । वास्तवमा राजनीतिक रंगबिनाको नागरिक नेपालको संविधानले परिकल्पना पनि गरेको छैन । आदर्श बोल्न र ताली पाउनु एउटा कुरा हो । तर, हरेक ब्यक्तिको आफ्नो विचार हुन्छ र पत्रकारले हरेक विचारको सम्मान गर्दछ । व्यावसायिक पत्रकार भनिए तापनि पत्रकार एउटा नागरिक पनि हो । तर, नेपाली पत्रकारिताको आदर्श नारा वा वाक्य राजनीतिले धुलिसात पारेको छ । प्राकृतिक विपत्ति, महामारी वा अन्य कुनै आर्थिक संकट आइपर्दा न्यून तलबमा काम गर्ने पत्रकारहरू नै मालिक, हाकिम वा व्यवस्थापकको कोपभाजनमा पर्छन् । तर पत्रकार आफै पनि कति व्यावसायिक छन् र कति पत्रकारिता मात्रै गर्छन् त्यो पनि खोजीको विषय हो । विभिन्न पेशा व्यवासायमा संलग्न तथा सल्लाहकार भएर कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्नेहरू आफूलाई किन पत्रकार भनाउन चाहन्छन् ? आदर्शका कुरा एकातिर छ तर पत्रकार हुँ भन्दै हिँड्ने पनि पत्रकार के कति अन्य पेशा व्यवसायमा संलग्न छन्, कति समय पत्रकारिता गर्छन् र कति समय अन्य पेशा व्यवसाय गर्छन् । समाजले भनेको पत्रकारिता र पत्रकारहरूले गरिरहेको पत्रकारिताबीच के अन्तर छ ? यसमा विश्वविद्यालयका पत्रकारिकताका अध्यापक तथा अनुसन्धानदाताहरूले सोध गर्नुपर्ने र त्यसको निष्कर्ष समाजमा पस्कनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले पत्रकारिताका विकृति, विसंगति र आयामका बारेको अनुसन्धानका लागि कति खर्च गरेको छ ? सरकारले पत्रकारको क्षमता र वृत्ति विकासका मुद्दामा कत्तिको ध्यान दिएको छ ? स्वयं पत्रकारले कति पत्रकारिता गर्छ, स्वार्थ बाझिने कार्यमा संलग्न कति छन्, कति राजनीति वा अन्य पेशाको ढाकछोप गर्न पत्रकारितको आवरण प्रयोग गर्दछ । पत्रकार श्रमजीवी हुन् कि होइनन् ? प्रश्नहरू सामान्य नै हुन् । तर यसको उत्तरले पत्रकारिताको भविष्य निर्धारण गर्दछ ।
यतिबेला पत्रकारिताको अवसर र चुनौतीहरू के–के छन् ? नेपाली पत्रकारिताको सम्भाव्य अवसर र चुनौती के–के छन् ? पत्रकार महासंघको निर्वाचनले कस्ता व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ ? भन्नेलगायतका विविध सवालमा केन्द्रित भई नेपाल पत्रकार महासंघका तीनजना पूर्वअध्यक्ष र अध्यक्षसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :